ဖိုးနိုင်၀င်းပါ — MYSTERY ZILLION
Phoe Naing Win
September 2008 edited October 2008 in မိတ်ဆက်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ.... ကျွန်တော့်ညီအပြောများနေတာနဲ့ လေ့လာကြည့်တော့ စိတ်၀င်စားစရာကောင်းတာနဲ့ မင်ဘာ၀င်လိုက်ပါတယ်။ လေ့လာထားတာတွေ အချင်းချင်း ဖလှယ်ကြတာပေါ့နော..။
Phoe Naing Win wrote: »
ကြိုဆိုပါတယ်ကိုဖိုးနိုင်ဝင်း ခင်ဗျား။ :6::6::6::6: အခုလိုသိထားတာလေးတွေ ဝေမျှမယ်ဆိုလို ဝမ်းမြောက်ကြောင်းပါ။ အသိပညာတွေ ဖလှယ်ကြတာပေါ့နော်။
ကြိုဆိုပါတယ် အစ်ကိုဖိုးနိုင်၀င်းခင်ဗျား။ ကျွန်တော်က အစ်ကို့ညီနဲ့ခင်ပါတယ်။ ၀မ်းသာပါတယ်ခင်ဗျ ..ခုလို မင်ဘာ၀င်လာတာ။ ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်နေတဲ့ နေရာလေးတွေမှာ ၀င်ရောက်ထောက်ပြ ဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျ။ သိထားတာလေးတွေလဲ ေ၀မျှပေးပါဦး။ :77:
ကျွန်တော် အစ်ကို့စာတွေ ဖတ်ဘူးပါတယ် ခင်ဗျ။
ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း... edu မှာ စာလေးနည်းနည်းသင်ပေးပါ။ အကြမ်းရေးထားတာတွေ ကျွန်တော့်ဆီပို့လိုက်။ ဖိုရမ်မှာ မေးတာလေးတွေ၀င်ဖြေပေးပါ။ ခပ်သွက်သွက်လေးလုပ်စမ်းပါ...။
တိုးကြီးကိုလဲ ပြောစမ်းပါဦး။ ကျွန်တော်လဲပြောမယ်။ စာသင်ဖို့။
Warmly welcome to MZ.
If you have anything diff tell any moderators but if you have beautiful girls to share don't forget to inform me. I will be looking forward to your contributions.
၀မ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုပါတယ် .....
၀င်ရောက်ဆွေးနွေးမျှေ၀မယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ ဖိုရမ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ...
လေ့လာထားတာချင်း ဖလှယ်ကြတာပေါ့ ဆိုရင် တော့....အစ်ကိုကြီးပဲပြောပြတော့...ဟီး..ဟီး...
လေ့လာထားတာဘာမှ မရှိဘူး.....အခုမှ အကုန်လုံးကို လိုက်စူးစမ်းနေတုန်းပဲ.....မယုံရင် ဒီကအစ်ကို
နည်းပညာဆိုင်ရာဗဟုသုတတွေ အသစ်တွေတော့သိရတော့မယ်...warmly welcome ပါအစ်ကိုကြီး
ဆရာဝင်လာတာဟာ ကျွန်တော်တို့ mz အတွက်တအားပါ။ လုပ်ပါဆရာရာ ကျွန်တော်တို့လဲစာသင်ချင်လို့ပါ။
ဆရာဖိုးနိုင်ဝင်းက ဝင်ရောက်ပညာသင်ကြားပေးမယ်ဆိုတာသိရတော့ mz အတွက်အရမ်းဝမ်းသာမိပါတယ်ဗျာ။
ဟုတ် ရှေ့ က အစ်တိုကြီး များ ကြိုဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲ
ကျွန်တော်လည်း Warmly Welcome from MZ City လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျား
edu မှာစာသင်ပေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း တက်ဖြစ်အောက်ကိုတက်ပါဦးမယ်
တကယ့်ကို ဆရာဖိုးနိုင်ဝင်းလားဗျ ... ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာ ... ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ ... စာတွေဖတ်ဖူးသလို သင်ပေးပါဦးလို့ ...
ကျွန်တော်က ဆရာသင်တဲ့ hardware သင်တန်းကို တက်ဖူးပါတယ်..
ဆရာရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေလဲ အခုထိ သိမ်းထားဆဲပါ..:D
ဆရာအခုလို လာရောက်သင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာမိပါတယ် ဆရာခင်ဗျ.
Mz ကြီးတော့ တကယ့် ဆရာတွေလာစုမိနေပါပြီ
mz ကြီးတော့ သိပ်အကျိုးရှိမှာ
တကယ် masterpiece ကြီးကိုး ... မင်္ဂလာပါဗျာ ...
Mz က လူတော်တော်များများ ကိုဖိုးနိုင်၀င်း ကိုသိကြတယ်နော်
နွယ်နီက ကိုဖိုးနိုင်၀င်း ကိုရော ကိုဖိုးနိုင်၀င်းရဲ့ ညီကိုလည်းမသိဘူး
ဘယ်သူလဲဟင် ကိုဖိုးနိုင်၀င်းညီ က ...............
ကိုဖို်းနိုင်၀င်းက စာသင်မယ်ဆိုတော့ နွယ်နီလည်း စာသင်ချင်တယ်နော်..........
သိချင်ရင် လွယ်လွယ်လေး ပန်းဆိုးတန်းက စာအုပ်ဆိုင်တွေသွား ကွန်ပျူတာ စာအုပ်တန်းကိုသွား နဲနဲ မျက်စေ့ ရှင်ရှင်ထား တွေ့မယ်ဗျား ... :d
အကိုရေကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ... အစ်ကိုက ကျွန်တော်ကိုမသိပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ အစ်ကို့ကို သိနေပါတယ်.... စာတွေလဲ၀င်သင်ပေးပါအုံးခင်ဗျာ......... စောင့်မျှော်နေပါတယ်..........
ဟုတ်တယ်ဗျာ မနွယ်နီရ ကွန်ပျူတာဆိုင်ကိုသွားကွန်ပျူတာစာအုပ်တွေကိုမျက်စိရှင်ရှင်နဲ့ ရေးတဲ့ဆရာနာမည်ကိုဖတ်ကြည့်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ဟေ့ ..... အချိန်ရရင် ပြန်ရေးလိုက်ဦး ... သံသယစကားလုံးတွေ တွေ့နေရပြီ။
ဘာနဲ့မှ ကျော်မ၀င်နဲ့။ အက်ဒမင်ဆိုရင် အိုင်ပီထောက်ကြည့် လို့ရတယ်။
ဟောဒီမှာ သူ့ gmail ... [email protected] <[email protected]>
ကဲ ... မယုံရင် မေးကြည့်ကြတော့...။ :14:
ဇွတ်ကြီးပါလား။ သားသားကတော့ ယုံတယ်နော် :d
glad to see u all.
i can't use weeks days so sorry for delay.
စာ၀ိုင်းသင်ပေးပါ ဦး နိင်၀င်းရယ်
အားလုံး ကတောင်းဆိုနေတာ ပါ